दोस्रो पटक खोलिए ब्यारेका सबै ढोका
इनरुवा। ब्यारेज पुललाई खतरा पुर्याउने अवस्था सीर्जना भएपछि गयराती खोलिएका ५६ ढोका पानीको बहावमा कमी आउना साथ बन्द गर्न थ...
सप्तरीमा पाँच सय भन्दा बढी घर डुवानमा
राजविराज। अविरल वर्षाका कारण विभिन्न नदी खोला नालामा उर्लिएर आएको बाढीले ठाउँ ठाउँमा तटबन्ध भत्काउँदा सप्तरीमा करिब ५ सय...
कोशीमा पानी बढ्यो – चतरामा खतरा !
अमर काफ्ले इनरुवा/ केहिदिन यताको लगातारको वर्षाका कारण यतिबेला धेरैजसो भेग डुबानको चपेटमा परेको छ । सुनसरीको हकमा समेत ख...
दुर्घटनामा मधेशाका युवा नेताको मृत्यु
इनरुवा। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्र्तगत इनरुवा सडक खण्डमा भएको दुर्घटनामा इनरुवा ६ मधेशाका युवा नेता भोगेन्द्र घिमिरेको ज...
बाढी प्रभावित भोक्राहा नरसिंह ५ मा राहत बितरण
इनरुवा। अबिरल वर्षाका कारण पुर्वका अधिकांस स्थान डुबानमा परेको छ। यसैगरी सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको वडा नं. ४...
कोशी व्यारेजमा रातो बत्ती, स्थानीय बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह
इटहरी । सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढेको छ । तीन दिनदेखिको वर्षाले नदीमा पानीको बहाव बढेको हो । सप्तकोशीमा शुक्रबार विहा...
सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्नेमा जोड
रक्तदान, बृक्षारोपण र गुरुको सम्मान गर्दै गुरु पूर्णिमा
इनरुवाका बाढी पीडितलाई पण्डितको सहयोग